Cisbitaalada Muqdisho waxaa sawiradan maanta kasoo qaaday Aamiin Yusuf
Hay’adda Al-Manhal oo ka mid ah hay’adaha samafal ee ka jira Magaalada Muqdisho ayaa gargaar daawo ah gaarsiiyay isbitaallada Magaalada Muqdisho, waxayna daawooyinkaas isugu jireen 6520-Faleebooyinka lagula dagaallamo shuban biyoodka ah, 400-Kaanoolka ah, 20-Kg oo kalooriin ah iyo 100-Sharooto ah.
Kaalmadaan ayaa waxaa la gaarsiiyay isbitaallada Magaalada Muqdisho oo ay ka mid yihiin isbitaallada Banaadir, Al-Xayaat, Carrafaat iyo Martiini; waxayna ballanqaadday hay’ad-du in ay sii wadi doonto howlaha samofal ee ay u hayso shacbiga.
Hay’addaan Al-Manhal waa hay’ad samafal oo ka jirta Muqdisho, waxayna qabataa howlo isugu jira waxbarasho, Caafimaad iyo waxyaabo la xirira samofalka bulshada sida Wacyi-gelinta dadka, waxay hay’addani leedahay laba xaruumood oo ay midi tahay xarun lagu daweeyo TB-da iyo xarun lagu daweeyo bukaanka caadiga ah (OPD).
Hay’adda Al-Manhal 1998-dii ilaa waqtigaan ayay ka soo shaqeynaysay arrimahan isugu jira wacyi gelinta iyo gacan siinta Bulshada iyo gargaarrada lagula tacaalayo cudurka daacuun caloolaha.
waxaa magaallada Muqdisho maalmahaan ku soo kordhayay cudurka Shubanka, iyadoo Isbitaallada intooda badan ay soo gaarayaan dad la ildaran cudurka Shubanka, waxaana la sheegay in dadka ugu ba'an ee cudurkan uu hayo ay yihiin dadka ku jira xeryaha qaxootiga magaallada Muqdisho, kuwaasoo iyagu ka bara kacay dagaalladii ka dhacay dalka gudihiisa. Hay'adda Al-Manhal ayaa markii ay maqashay dadka la ildaran cudurka Shubanka waxa ay markiiba billowday in ay deeq dawo ah gaarsiiso isbitaallada Magaallada Muqdisho, kuwaasoo lagula tacaalayo cudurka Shubanka.
xilliga kuleylaha marka la gaaro ayaa waxaa kaca cudurka Shubanka, iyadoo dadka intooda badan aysan cabin biy nadiif ah, waxaana taas dhaqaatiirtu ay ku micneeyeen iyadoo ay ugu wacan tahay iyadoo ay guraan ceelashii biyaha, sidoo kale dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in xitaa marka la galo xilliga roobka in xitaa uu imaan karo cudurka Shubanka, ugu dambeyntiina hay'adda Al-Manhal waxa ay ballan qaadday in ay wadi doonto howlaha ay uga hortagayso cudurka Shubanka inta laga cirib tirayo.